Updates Archives - Dainik Headlines
December 8, 2018	Updates 0
चीनमा भइरहेकाे मिस वर्ल्ड २०१८ काे उपाधि मेक्सिकाेले जितेकाे छ । अन्तिम ५ मा छानिएका थाइल्याण्ड, युगाण्डा, मेक्सिकाे, बेलारुस र जमैकामध्ये निर्णायक मण्डलकाे मन जित्दै मेक्सिकाेकी सुन्दरी भेनेसा देलिअाेनले मिस वर्ल्ड २०१८काे ताज पहिरिएकी हुन् । १३ जना निर्णायकले अन्तिम ५ प्रतिस्पर्धीमध्यबाट लाई उपाधि विजेता घाेषणा गरेका थिए । युगाण्डाले …
हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले पुजाआजाको समय र शुभ साइतमा दियो बाल्ने गर्छन । हिन्दु धर्मशास्त्रमा दियो बाल्नु निकै शुभ मानिन्छ । यसैले धेरै मानिसहरु आफ्नो घरमा दियो बाल्ने गर्छन् । यसको उज्यालोले दु:ख कष्ट भाग्ने विश्वाश रहेको छ । बेदमा अग्निलाई भगवान नै मानिएको छ । यसैले हिन्दू धर्ममा कुनै शुभ कार्य …
December 7, 2018	Updates 0
चिनमा भइरहेको मिस वर्ल्ड २०१८ मा सहभागिता जनाएर संसारभर चर्चा कमाइरहेकि नेपाली चेली श्रृङ्खला खतिवडाले राखिन मिस वर्ल्डको इतिहासमै यस्तो रेकर्ड जुन आजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले राखेकि छैनन । दुई वटा अवार्ड जितेसंगै यो यस्तो रेकर्ड बन्यो कि जुन आजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले बनाउन सकेका छैनन । सँगै मिस वर्ल्ड …
सावधान !! मदिरा पिउनु हुन्छ , १० सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु
‘यो रक्सीको जातै यस्तै’, ‘अलिकति मात्र हो पिएको, लौन हजुर जातैले दिएको’ यस्ता अनगिन्ती गीत बनेको मदिराको विषयमा । ठेट भाषामा रक्सी, जाड र अलि परिस्कृत शब्दमा मदिरा । पिता-पूर्खादेखि पिउँदै आएको पेय भनेर यसलाई हामीले निरन्तरता दिदै आएका छौं । मदिरा पिउनुलाई हामी ‘परम्परा’, ‘संस्कृति’ भनेर भ्रमित बनाउने चेष्टा …
December 6, 2018	Updates 0
काठमडौं : कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका छिमेकी प्रदीप रावलले हत्यामा संलग्न रहेको साविती बयान दिएका छन्। केही दिनअघि राजधानीबाट पक्राउ परेका रावलले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँग हत्या स्वीकार गरेका हुन्। गएराति नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालको उपस्थितिमा भएको बयानमा रावलले घटना स्वीकार गरेको सीआईबी स्रोतले बताएको …
घरमा कमिला आए के हुन्छ ? शास्त्र अनुसार यी ५ जीव घरमा पसे यस्तो हुन्छ ! जानी राख्नुस
December 4, 2018	Updates 0
शास्त्र र पुराणहरुमा हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका कही यस्ता आदतहरुको दाबी गरिएको छ । घरमा कमिला आउनुले यस्तो अर्थ दिन्छ । यी ५ जीव घरमा पसे यस्तो हुन्छ । यदि तपाई पनि शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईका लागि केही जानकारी निम्न छन् । कमिला शास्त्रअनुसार, यदि अचानक घरमा कमिलाले दाना ओसारेको …
स्त्री पुरुषको कुन अंगमा कपाल हुनाले शुभ अशुभ हुन्छ त्यो जान्नु पनि एउटा कौतुहलतको विषय हो । ज्योतिषिय विज्ञानका अनुसार महिलाको हातमा रौहरु हुन अशुभ मानिन्छ । त्यस्ता महिलाहरु ज्यादा रिस भएका र सानो सानो कुरामा धेरै रिसाउने गर्छन् । सानो समस्या परेपनि त्यसैमा अड्केर बस्ने बानी भएका हुन्छन् हातमा …
बिवाह भए देखि मलाई श्रीमानले ३,४ पल्ट भन्दा यौन सम्पर्क गरेनन, सधै हस्तमैथुनमै रमाए र बच्चा पनि भएन भन्दै रुँदै मिडियामा आईन् यी महिला (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १७ मंसिर । अरुलाई न्याय दिनेको घरमै अन्यय भयो भने के हुन्छ । अहिले यस्तै भएको छ सर्बोच्चका न्यायधीश प्रकाशमानसिंह रावलको हकमा । आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै रावलकी श्रीमती ललिता रावल मिडियामा आएपछि यस्तो विषय खुलेको हो । अहिले रावलकी श्रीमतीले रावलमाथि यौन असक्षमताको आरोप लगाएकी छन् । श्रीमानसँग …
नेपाली चेलीले विदेशमा भोग्नुपरेको दर्दनाक यर्थाथलाई भिडियोमा हेर्नुहोस्, छोरीले पाएको पिडामा छटपटिए यि बाबु
December 3, 2018	Updates 0
काठमाडौँ – उदयमान नवगायक तथा समाजसेवी जितेन बान्तावा राईको स्वरमा रहेको “नजाउ चेली विदेश” बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो गीतको म्युजिक भिडियोमा लामो समय देखि ससक्त कलम चलाउदै आउनु भएकी संगीता बायुङ्ग राईको शब्द रचनालाई गायक जितेन बान्तवा राई आफैले संगीत भरेका छन् । उक्त गीतको एरेन्ज …
धिरेन शाक्यको अपूरो आर्मी यात्रा छोरीले पूरा गर्दै हेर्नुहोस धिरेन शाक्यको आर्मी छोरी
राम्रो अभिनयका साथै उनी फिटनेसका कारण पनि चर्चामा छन् । फिटनेसमा उनी यति धेरै जागरुक छन् कि उनले आफ्नै जिमखाना पनि खोलेका छन् । उनको जिमखाना जाउलाखेलमा छ । जिममा उनी सकेसम्म धेरै समय बिताउँछन् । त्यस्तै उनका अन्य दुईवटा अफिस, एउटा होटेल र एउटा फिल्म प्रोडक्शन कम्पनी छन् । …